Itoobiya Oo Sheegtay in ay Fashilisay Qorshe dil oo Loo Geysan Lahaa Madax sare | Gaaroodi News
War qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Itoobiya ayaa lagu sheegay in koox maleegeysay in doorashada ay carqaladeyso laga hortagay.
Laanta sirdoonka iyo amniga iyo qeybta ka hortagga Argagixisada ee Itoobiya ayaa tilmaamay in qorshaha ay wadeen dad qurba jog ah iyo laba sarkaal oo aan la magacaabin, sida laga sheegay warbaahinta dowladda.
Sida ku xusan warbinta, “waxaa tallaabo laga qaaday kooxda is abaabushay iyo hoggaamiyeyaashooda”.
“Waxaa la qabtay hub sharci darro ah oo loo diyaariyay howlgalka, baasaboorro, lacag badan, iyo macluumaadka cadeynaya howlgalkooda”, ayaa lagu yiri qoraalka ciidamada Itoobiya.
Telefishinka dowladda Itoobiya ee ETV ayaa laga baahiyay muuqaalka dadka lagu eedeeyay in ay qorshaha ka dambeeyeen, baasabooro iyo waxyaabo kale.
“Kooxda oo ka howlgaleysay gudaha iyo dibadda dalka, waxay si sir ah ula xiriitrayeen siyaasiyiin, askar iyo xubno ka tirsan dowladda, si ay u fuliyaan qorshaooda carqaladeynta doorashada.” Aye lagu sheegay warka dowladda.
Sidoo kale waxay kooxda ku eedeysay in ay qorsheynayeen isu soo baxyo ka dhan ah dowladda oo ka dhaca itoobiya.
Sidoo kale, warbixinta laga akhriyay ETV, qeybta caalamka la hadasho, waxaa lagu sheegay in “kooxda ay qorsheynayeen in ay dilaan xubno sare oo ka tirsan dowladda”, balse, ma aysan sheegin dadka uu bartilmaameedka ahaa.
Sida ku xusan warka ay soo saareen ciidamada sirdoonka Itoobiya, waxaa jiray farriimo ay kooxdan si maalinle ah ugu dirayeen warbaahinta, iyagoo dadka “Amxaarada ku dhiiragelinayay in ay hubka qaatan oo ay ka hortagaan weerarada shacabkooda lagu hayo”.
Dowladda Itoobiya waxay tilmaamtay in baro bulsho oo kooxdan ay ku wada xiriireysay ka hortageen. “Waxaa barahaas laga kala mamulayay Jarmalka iyo mareykanka”, ayaa ku xusan warbixinta.
Sidee dadka falanqeeya xaaladda Itoobbiya u arkaan waxa socda?
Tan iyo intii uu Abiy bilaabay qorshayaashiisii isbeddel waxaa guud ahaanba dalka Itoobbiya laga arkayay dhacdooyin cusub oo si uun saamayn ula lahaa isbedelladii raysalwasaaraha. Xirsi Cabdiqaadir Maxamed oo falanqeeya xaaladda Itoobbiya waxa uu ku qeexay in wax is dhaafsan yihiin.
“Dalkan isbeddel baa ka dhacay, isbeddelka debedii waxyaabo badan ayaa jira ooo dadka siyaasadda ugu dhuundaloola ay ku diiddan yihiin isbeddelkii dhacay oo ay ugu horrayso sidii loo maaraayey iyo sida loo sameeyey xisbigii PP iyo weliba xilligii doorashada oo taagan, taas oo keentay in waxyaabo badan ay is qaban la’ yihiin” ayuu yidhi falanqeeye Xirsi Magan
Dalka Itoobbiya waxaa dhawaan la filayaa in ay ka dhacdo doorasho, iyadaa dhinacyo badan oo midwga Yurub ka mid yahay ay sheki geli gelinayaamn isku hallaynta doorashadaas, iyaga oo joojiyeyba kormeerayaashii ay u soo dirsan lahaaayeen.
“Waddan kacdoon iyo isku dhacyo qawmi ah ay ka jiraan, dagaalna uu ku socdo in doorasho ay ka dhacdo waa nadir, wayna adag tahay. Hadda deegaanka soomaalida ayaa la odhan karaa waa kan ugu nabdoon ee dhaqdhaqaaq doorasho uu ka socon karo.”
Dhanka kale dadka wax falanqeeya ayaa qaba in culaysyada siyaasadeed ee saaran Abiy, ay wax u dhimayaan habkii uu u waajihi lahaa doorashada dalka, kuna eedeeynaya xukuumadda in meelo kale xal ka laga raadin lahaa, ka hor inta aanay xaaladdu ka sii darin.
“Way habboonaan lahayd in qaab sidan ka duwan ay wax u maarayso, wadahadal lala furo mucaaradka, oo si nabadoon loola sameeyo wadahadal, si loo galo doorasho nabad ah”
Doorashada Itoobiya 2021
Doorashada lagu wado dabayaaqada bisha June ee sanadkan iney dalka Itoobiya ka dhacdo waxaa ku loollamaya 47 xisbi, oo isugu jira kuwa u tartama heer qaran iyo kuwa heer deegaan.
Seddexda xisbi ee musharrixiiinta ugu badan diiwaan geliyey ayaa kala ah EPP (xisbiga talada dalkaasi haya), EZEMA iyo INNAT, waxayna soo sharraxdeen musharraxiin kor u dhaafaya 8,200.
Wuxuuna guddiga doorashooyinka qaranka ee dalka Itoobiya uu sheegay inuu dadaal xooggan uu ugu jiro goobaha sababa amniga la xiriira ay diiwaangelinta codbixiyeyaasha uga billaabmin diiwaangelinta looga billaabi lahaa.
Doorashada Itoobiya ka dhaceyso sanadkan 2021-ka ayaa ka dhici doonto dhammaan deegaannada uu dalkaasi ka kooban yahay iyo labada maamul magaalo ee Addis Ababa iyo Diridhaba, balse doorashada ayaan ka dhaceyn deegaanka Tigraay uu ka socda dagaalka u dhaxeeya ciidamada dowladda dhexe iyo kuwa daacadda u ah Jabhadda TPLF.